Steps to use Pregnancy test strip/UCG strip - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကိုယျဝနျစဈတဲ့ ဆီးစဈတံကိုဘယျလိုသုံးမလဲ ?
ကိုယျဝနျရှိမရှိစဈတဲ့ နညျးလမျးတှထေဲမှာ ဆီးစဈတဲ့အတံကတော့ အရမျးအသုံးဝငျပွီး လူကွိုကျမြားတဲ့နညျးလမျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ သုံးရတာလှယျကူတာ၊ အကုနျအကနြညျးတာ၊ မွနျဆနျတာ၊ တိကတြာ၊ ကိုယျ့ဟာကိုလုပျနိုငျတာတှကွေောငျ့လူသုံးမြားကွပါတယျ။ သို့သျော ဘယျလောကျလှယျကူတဲ့နညျးဖွဈပမေယျ့ သခြောမသုံးရငျတော့ မှားယှငျးတဲ့အဖွတှေထှေကျလာနိုတဲ့အတှကျ သခြောစှာသုံးစှဲဖို့လိုပါတယျ။
ဆီးစဈတဲ့အခါမှာ ဘယျအခြိနျမှာရတဲ့ဆီးနဲ့စဈစဈအဆငျပွပေါတယျ။ သို့သျောပိုမိုကောငျးမှနျတာကတော့ မနကျစောစော ပထမဦးဆုံးရတဲ့ဆီးကို ပိုပွီးသုံးသငျ့ပါတယျ။ သုံးတော့မယျဆိုရငျ ရကျလှနျနလေား၊ ပေါကျပွဲနလေား၊ နရေောငျထဲမှာအကွာကွီးထားမိသလား စတာတှကေို အရငျဆုံးစဈဆေးရပါမယျ။ ထုတျကုနျမကောငျးရငျ အဖွကေလညျးမှားယှငျးနိုငျပါတယျ။
စိတျခရြပွီဆိုရငျတော့ စဈဆေးရတော့မှာဖွဈပါတယျ။ အရငျဆုံးသနျ့ရှငျးတဲ့ခှကျတဈခုထဲကို ဆီးပေါကျထညျ့ရပါမယျ။ ဆီးသှားပွီးရငျ ဆီးစဈတံကိုဖောကျပွီးစဈဆေးနိုငျပါတယျ။ ဆီးစဈတံကို ကိုငျရာမှာတော့ အရောငျခွယျထားတဲ့နရောကနကေိုငျရပါမယျ။ ဒေါငျလိုကျကိုငျရမှာဖွဈပွီး ဆီးထဲကိုတညျ့မတျစှာနှဈခရြပါမယျ။ နှဈခရြငျလညျး lineကိုမကြျောအောငျသတိထားပွီးနှဈခရြပါမယျ။ lineကြျောသှားရငျတော့ အဖွမှေားနိုငျပါတယျ။
နှဈခပြွီးရငျ 5secondခနျ့နှဈထားရပါမယျ။ အခြိနျစပွေီ့ဆိုရငျတော့ သနျ့ရှငျးတဲ့နရောတဈခုမှာ ထားပွီးအဖွစေောငျ့လို့ရတဲ့အဆငျ့ရောကျပါတယျ။ 10minutesခနျ့စောငျ့ပွီးရငျတော့ အဖွရေပွီဖွဈပါတယျ။
အဖွဖေတျရာမှာတော့ တဈကွောငျးပျေါလား၊ နှဈကွောငျးပျေါလာကို ဖတျရမှာဖွဈပါတယျ။ တဈကွောငျးပျေါရငျကိုယျဝနျမရှိပဲ နှဈကွောငျးပျေါရငျတော့ ကိုယျဝနျရှိနိုငျခွမြေားပါတယျ။ ဆီးစဈတဲ့ရဲ့သဘောတရားက ဆီးထဲမှာhuman chirionic gonadotrophin(hCG)ဆိုတဲ့ ဟျောမုနျးရှိရငျ နှဈကွောငျးပျေါတာဖွဈပါတယျ။ hCGတှတေဲ့အဖွဈအမြားဆုံးအကွောငျးရငျးကတော့ ကိုယျဝနျရှိနတောဖွဈလို့ နှဈကွောငျးပျေါတာနဲ့ကိုယျဝနျရှိတယျလို့ဆိုကွပွီး ကိုယျဝနျမရှိပဲနှဈကွောငျးပျေါနရေငျတော့ hCGထှကျနတေဲ့အခွားအကွောငျယတှကေိုစဉျးစားရပါမယျ။
ဆီးစဈတံမှာအဖွထှေကျတာမြိုးစုံဖွဈနိုငျပွီး အနညျးဆုံးတဈကွောငျးတော့ သခြောပေါကျပျေါရမှာဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါlineကို control line လို့ချေါပွီး ဆီးစဈတာနဲ့ပျေါလာပါတယျ။ တဈကွောငျးမှမပျေါရငျတော့ မှားနတောဖွဈလို့ထပျစဈရပါမယျ။ နှဈကွောငျးပျေါနရေငျတော့ ကိုယျဝနျရှိနိုငျပါပွီ။ တဈခါတဈလေcontrol lineကမပျေါပဲ နောကျ line က ပျေါနပေါတယျ။ ထိုအဖွကေတော့ ကိုယျဝနျမရှိဘူးလို့မပွောနိုငျသလိုရှိတယျလညျးမပွောနိုငျလို့ ပွနျစဈရမှာပဲဖွဈပါတယျ။
ဆီးစဈတာကတော့ လှယျကူပွီးမွနျဆနျတယျဆိုပမေယျ့ သခြောစှာသုံးစှဲမှသာ မှနျကနျပွီးစိတျခရြမှာဖွဈပါတယျ။
ကိုယ်ဝန်စစ်တဲ့ ဆီးစစ်တံကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ ?
ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိစစ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေထဲမှာ ဆီးစစ်တဲ့အတံကတော့ အရမ်းအသုံးဝင်ပြီး လူကြိုက်များတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သုံးရတာလွယ်ကူတာ၊ အကုန်အကျနည်းတာ၊ မြန်ဆန်တာ၊ တိကျတာ၊ ကိုယ့်ဟာကိုလုပ်နိုင်တာတွေကြောင့်လူသုံးများကြပါတယ်။ သို့သော် ဘယ်လောက်လွယ်ကူတဲ့နည်းဖြစ်ပေမယ့် သေချာမသုံးရင်တော့ မှားယွင်းတဲ့အဖြေတွေထွက်လာနိုတဲ့အတွက် သေချာစွာသုံးစွဲဖို့လိုပါတယ်။
ဆီးစစ်တဲ့အခါမှာ ဘယ်အချိန်မှာရတဲ့ဆီးနဲ့စစ်စစ်အဆင်ပြေပါတယ်။ သို့သော်ပိုမိုကောင်းမွန်တာကတော့ မနက်စောစော ပထမဦးဆုံးရတဲ့ဆီးကို ပိုပြီးသုံးသင့်ပါတယ်။ သုံးတော့မယ်ဆိုရင် ရက်လွန်နေလား၊ ပေါက်ပြဲနေလား၊ နေရောင်ထဲမှာအကြာကြီးထားမိသလား စတာတွေကို အရင်ဆုံးစစ်ဆေးရပါမယ်။ ထုတ်ကုန်မကောင်းရင် အဖြေကလည်းမှားယွင်းနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ချရပြီဆိုရင်တော့ စစ်ဆေးရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ဆုံးသန့်ရှင်းတဲ့ခွက်တစ်ခုထဲကို ဆီးပေါက်ထည့်ရပါမယ်။ ဆီးသွားပြီးရင် ဆီးစစ်တံကိုဖောက်ပြီးစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ ဆီးစစ်တံကို ကိုင်ရာမှာတော့ အရောင်ခြယ်ထားတဲ့နေရာကနေကိုင်ရပါမယ်။ ဒေါင်လိုက်ကိုင်ရမှာဖြစ်ပြီး ဆီးထဲကိုတည့်မတ်စွာနှစ်ချရပါမယ်။ နှစ်ချရင်လည်း lineကိုမကျော်အောင်သတိထားပြီးနှစ်ချရပါမယ်။ lineကျော်သွားရင်တော့ အဖြေမှားနိုင်ပါတယ်။
နှစ်ချပြီးရင် 5secondခန့်နှစ်ထားရပါမယ်။ အချိန်စေ့ပြီဆိုရင်တော့ သန့်ရှင်းတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ ထားပြီးအဖြေစောင့်လို့ရတဲ့အဆင့်ရောက်ပါတယ်။ 10minutesခန့်စောင့်ပြီးရင်တော့ အဖြေရပြီဖြစ်ပါတယ်။
အဖြေဖတ်ရာမှာတော့ တစ်ကြောင်းပေါ်လား၊ နှစ်ကြောင်းပေါ်လာကို ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ကြောင်းပေါ်ရင်ကိုယ်ဝန်မရှိပဲ နှစ်ကြောင်းပေါ်ရင်တော့ ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်ခြေများပါတယ်။ ဆီးစစ်တဲ့ရဲ့သဘောတရားက ဆီးထဲမှာhuman chirionic gonadotrophin(hCG)ဆိုတဲ့ ဟော်မုန်းရှိရင် နှစ်ကြောင်းပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ hCGတွေ့တဲ့အဖြစ်အများဆုံးအကြောင်းရင်းကတော့ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတာဖြစ်လို့ နှစ်ကြောင်းပေါ်တာနဲ့ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုကြပြီး ကိုယ်ဝန်မရှိပဲနှစ်ကြောင်းပေါ်နေရင်တော့ hCGထွက်နေတဲ့အခြားအကြောင်ယတွေကိုစဉ်းစားရပါမယ်။
ဆီးစစ်တံမှာအဖြေထွက်တာမျိုးစုံဖြစ်နိုင်ပြီး အနည်းဆုံးတစ်ကြောင်းတော့ သေချာပေါက်ပေါ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါlineကို control line လို့ခေါ်ပြီး ဆီးစစ်တာနဲ့ပေါ်လာပါတယ်။ တစ်ကြောင်းမှမပေါ်ရင်တော့ မှားနေတာဖြစ်လို့ထပ်စစ်ရပါမယ်။ နှစ်ကြောင်းပေါ်နေရင်တော့ ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်ပါပြီ။ တစ်ခါတစ်လေcontrol lineကမပေါ်ပဲ နောက် line က ပေါ်နေပါတယ်။ ထိုအဖြေကတော့ ကိုယ်ဝန်မရှိဘူးလို့မပြောနိုင်သလိုရှိတယ်လည်းမပြောနိုင်လို့ ပြန်စစ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးစစ်တာကတော့ လွယ်ကူပြီးမြန်ဆန်တယ်ဆိုပေမယ့် သေချာစွာသုံးစွဲမှသာ မှန်ကန်ပြီးစိတ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။